नेपाल आज | निषेधाज्ञामा यसरी लिन सकिन्छ घरबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान)
निषेधाज्ञामा यसरी लिन सकिन्छ घरबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान)
बुधबार, २६ जेठ २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेको छ ।
यदी तपाईंसँग प्यान नम्बर छैन भने तपाईंको तलब रोकिने छ । सरकारले २०७६ साउनदेखि स्थायी लेखा नम्बरबाहक बाहेक अन्यलाई दिइने तलब तथा ज्यालाको भुक्तानीलाई खर्चमा लेखाउन नपाउने व्यस्था गरेसँगै प्यान नम्बर नभइ कर्मचारीको तलब खुवाउन कम्पनीहरुलाई समेत समस्या पर्ने छ ।
गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि कर्मचारी तथा कामदारहरूले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवसायको खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने व्यवहारमा प्रयोग भएको थिएन । तर, २०७६ साउनदेखि कुनै पनि कामरसेवा गरी तलबभत्ता, ज्याला लिने सम्पूर्णले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ ।
➢ नेपाली नागरिकको हकमा पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकताको अगाडि तथा पछाडिको Scan गरेर फाइल सुरक्षित गर्नुहोस ।
➢ गैर नेपाली नागरिकको हकमा पासपोर्ट साइजको फोटो, निज कार्यरत रहेको कार्यालयको सिफारिस, बिदेशी भनी प्रमाणित गराउने प्रमाणित कागजात संलग्न राखी Scan गरेर फाइल सुरक्षित गर्नुहोस ।
➢ "Mozilla Firefox" browser खोल्नुहोस् ।
➢ ird.gov.np टाइप गरि Enter key हान्नुहोस् ।
➢ Taxpayer Portal मा Click गर्नुहोस् ।
➢ Registration(PAN,VAT,EXCISE) को Application for Registration मा Click गर्नुहोस ।
➢ Username, Password, Re-Password, Contact No. Entry गर्नुहोस ।
➢ Personal PAN चेक बक्समा Click गर्नुहोस ।
➢ Verify गने अफिस छान्नको लागि -
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको लागि IRO मा Click गरिआफ्नो पायक पर्ने कार्यालय छान्नुहोस् ।
करदाता सेवा कार्यालयको लागि TSO मा Click गरि आफ्नो पायक पने पर्ने कार्यालय छान्नुहोस्।
➢ OK मा Click गर्नुहोस ।
➢ Continue मा Click गर्नुहोस । (Submission No. टिप्नुहोस्)
➢ नाम र थर नेपाली र अंग्रेजीमा Entry गर्नुहोस ।
➢ बि.सं. वा इ.सं. छानि जन्म मिती Entry गर्नुहोस ।
➢ सलंगमा पुरुष/महिला/तेस्रो लिङ्गी मध्ये एक छान्नुहोस् ।
➢ Scan गरेर राखेको Photo दायां तर्फको Browse मा Click गरेर Photo को फाइल छानेर Upload गर्नुहोस ।
➢ Citizenship Card को दायां तर्फको Upload Document भनेको Up Arrow बक्समा Click गर्नुहोस
➢ नागरिकता नं., नागरिकता जारी गर्ने कार्यालय, स्थान, जारि मिती Entry गर्नुहोस ।
➢ त्यसपछि Browse मा Click गरी Scan गरेको नागरिकताको फाइल Upload गर्नुहोस ।
गैर नेपाली नागरिकको हकमा माथी Scan गरेको फाइल Upload गर्नुहोस ।
➢ पेशागत License वा प्रमाणपत्र भए सो को नम्बर Entry गर्नुहोस ।
➢ कुनै कार्यालयमा काम गरेको भए कामको प्रकार पेशा छान्नु होस् । कार्यालयको सिफारिस समेत पेश गर्नु पर्छ । विधार्थी भएमा Others छान्नुहोस् ।
➢ पारिवारिक विवरण भर्नुहोस् ।
➢ स्थायी ठेगाना भर्नुहोस् ।
➢ अस्थायी ठेगाना भर्नुहोस् ।
➢ Save/Submit गर्नुहोस ।
➢ Print गरी छानेको कार्यालयमा गएर Verify गराइ कार्ड बनाउन जानुहोस् ।
घरमै बसेर लिए बीस जनाले पान नम्बर
आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट बन्दाबन्दीको समयमा बीस जनाले घरमा बसेर पान नं लिएका छन् । बन्दाबन्दीका कारण हिँड्डुल गर्न नपाएका, व्यापार व्यवसायका लागि अति आवश्यक परेका व्यक्तिले घरमा बसेर इन्टरनेटमार्फत पान नं लिएका हुन् ।
कार्यालयको वेबसाइट खोलेर आवेदन दिन सकिन्छ । आवेदकले ट्याक्स पे पोटलमा गएर आफ्ना आवश्यक कागजात अपलोड गरी पठाएपछि कार्यालयका अधिकृतले जाँचेर प्रमाणित भए पान नं उपलब्ध हुने सो कार्यालयले जनाएको छ ।
बनेको पान नं पुनः सम्बन्धित व्यक्तिको म्यासेन्जर वा इमेलमा पठाई सहयोग गरिएको कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । तत्काललाई नं मात्रै चाहिने कार्यका लागि यसरी काम गरिएको छ । प्रमाणपत्र चाहिएमा कार्यालय खुलेको समयमा आएर लैजान सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।